Rehefa manamboatra tranokala vaovao: refesina in-droa, manapaka indray mandeha | Martech Zone
Zoma, Aprily 16, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Douglas Karr
Ireo mpivarotra an-tserasera matetika dia mamolavola ny paikadin'ny tranokala vao noforonina tamin'ny alàlan'ny fandaniana ny fotoana rehetra amin'ny famolavolana ary avy eo ny fametrahana ilay tranonkala vaovao… avy eo mandrefy ny vokatry ny fanovana. Mihidy aho rehefa mahita orinasa sasany manaparitaka tranokala marobe ao anatin'ny volana maromaro satria “tsy nandeha” ny tsirairay.
Alohan'ny hanombohanao handamina ny volavolan'ny tranokala vaovao dia mila mahatsapa tanteraka ianao hoe aiza no misy ny tranokalanao izao. Ny fametrahana tranonkala vaovao imbetsaka dia toy ny manomboka marathon hatrany hatrany. Tsy hamorona ny fotoana very ianao, manosika ny famerenam-bola lavitra kokoa ianao.
Raha tsy nanana ianao Analytics aparitaka tanteraka sy refesina ny lafiny tsirairay amin'ny tranokalanao, makà fotoana hampiasana azy tsara ankehitriny - amin'ny tranokalanao ankehitriny. Mety ho hadalana ny mandany fotoana amin'ny fampiharana Analytics araka ny tokony ho izy amin'ny tranokala iray izay hataonao fako, fa mila mahatakatra ianao ny fomba nahatongavan'ny olona tao amin'ny tranokalanao, ny fitetezana ny tranokalanao ary ny niovany fo teo amin'ny tranokalanao misy alohan'ny hamoronana ny tranokalanao vaovao.
Ary koa, tokony ho mailo tsara ianao hoe inona ireo pejy izay mitana toerana tsara ankehitriny ho an'ny teny lakile mifandraika. Mampiasa fitaovana toa Semrush, azonao atao ny manondro ny pejy efa nataonao tondro ary milahatra tsara amin'ny motera fikarohana. Imbetsaka ny mpivarotra no mametaka tranokala vaovao misy ny hierarchy sy ny làlana niova tanteraka. Tsy tsara.
Ho fanampin'ny fikarohana, tranokala sy pejy miresaka dia tena zava-dehibe. Raha nanondro fifamoivoizana tamina tranokala hafa ny tranokala hafa, na notsoratadidy tamina takelaka sosialy ireo pejinao… dia tsy tianao hiafara amin'ny pejy 404 izany fifamoivoizana izany. Mamolavola drafitra fanodinana alàlan'ny pejinao taloha miaraka amina fifamoivoizana mankamin'ny pejy vaovao - ary alao antoka fa mifanaraka ny atiny.
Raha fintinina, refeso indroa ary tapaho indray mandeha. Refesina amin'ny fomba mahomby ny tranokalanao taloha Analytics, ny milina fikarohana sy ny backlinks. Mipetraha ny tranokalanao vaovao hanararaotra ny fifamoivoizana sy ny fahefana efa natsanganao ary, avy eo, aparitaho ilay tranonkala vaovao.
Tags: Malagasy famolavolanatranonkala
Tsiambaratelo momba ny famokarana: Tsy teknika foana ny teknolojia